प्रधानमन्त्रीले समृद्धि र आर्थिक बृद्धिदरलाई किन यसरी व्याख्या गरे ? • ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
प्रधानमन्त्रीले समृद्धि र आर्थिक बृद्धिदरलाई किन यसरी व्याख्या गरे ?
प्रकाशित मिति : 15 February, 2020 1:04 pm
काठमाडौं ३ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले नेपालको आर्थिक विकास र बृद्धिदर सन्तुलित भएको बताउनु भएको छ । दुई वर्षको उपलव्धी संसदलाई सम्वोधन मार्फत जानाकारी गराउने क्रममा प्रम ओलीले यस्तो बताउनु भएको हो । प्रधानमन्त्री आलीले समृद्धि र आर्थिक विकासका बारेमा के भन्नुभयो ? उहांकै शव्दमा ।
‘प्रश्न हुनसक्छ– समृद्धिको अभियानमा प्रगति कति भयो ? नेपालीलाई सुखी बनाउने अभियान कहाँ पुग्यो ? यस गरिमामय सदनको बढी समय नलिनका लागि हाम्रा घोषणा, २ बर्षका नीति÷कार्यक्रम, बजेट व्यवस्था र उपलब्धि समेटेको प्रकाशन सार्वजनिक गरिएको छ । त्यसलाई माननीय सदस्यहरुको जानकारीका लागि पिजन होलमा राख्न अनुमति चाहन्छु । यहाँ प्रगतिका केही पक्ष सङ्क्षेपमा राख्ने अनुमति चाहन्छु ः
–​यसको अर्थ, हामीले श्रम वजारमा प्रवेश गर्ने जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सकेका छौ भन्ने हो । हाम्रो श्रम बजारमा जति जनशक्ति प्रवेश गर्छन्, त्यो श्रमशक्तिलार्ई नयाँ रोजगारीले भेट्ने भेट्ने स्थितिमा छ । श्रम बजारमा पहिले भएका बेरोेजगारले काम नपाएका होलान,् तर नयाँ वेरोजगार थपिएका छैनन् । अहिले बेरोजगारहरुको तथ्यांक श्रम मन्त्रालयले संकलन गर्दैछ । विकास निमार्णकोे काममा श्रमिक अभावको स्थिति छ । यसको मतलब हो, आधारभूत तहमा रोजगारीका समस्याहरु क्रमशः हल हुँदै गएका छन् । हामीले थाँती रहेको पुरानो वेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेनौं होला, तर श्रम बजारमा जति थपिएका छन्, तिनीहरुमध्ये अधिकांशलाई सम्बोधन गर्न सकेका छौं । उपलव्ध जनशक्तिमा रहेको सीपको अभाव वा बेमेलका कारण जगेडा श्रमिकबीच अभावको अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । जीवनपयोगी शिक्षाको अभावमा शिक्षा, रोजगारी, पेशा र व्यवसायसँग आर्जित ज्ञान जोडिन सकेको छैन । जसले एकप्रकारको शिक्षित÷साक्षर वेरोजगारहरुको जमात पैदा हुन पुगेको छ ।’